Cudurka Corona: Cunto uu kariyay qof qaba coronavirus ma laga qaadi karaa cudurka? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Cudurka Corona: Cunto uu kariyay qof qaba coronavirus ma laga qaadi karaa...
Cudurka Corona: Cunto uu kariyay qof qaba coronavirus ma laga qaadi karaa cudurka?
Qeyb ka mid ah idaacadda galabnimo ee Dunida iyo Maanta waxaa isbuuciiba saddex maalmood ku baxa barnaamij su’aalo iyo jawaabo ah oo aan si dadban isugu xiriirinno dhageystayaasha iyo dhakhaatiirta, oo marba mid aan soo xulanno.
Dhammaan su’aaluhu waxay ku saabsan yihiin xanuunka safmarka ah ee Covid-19, iyadoo ujeeddaduna ay tahay inaan dhageystayaasheenna wax badan ka fahansiinno xaaladda cudurkan.
Lahaanshaha sawirkaBOSTON GLOBE
Su’aasha koowaad waxay ka timid Cabdicasiis Jaamac Yuusuf oo jooga Badhan, wuxuu dhakhtarka weydiiyay labo su’aalood oo kala ah:
Jawaabta dhakhtarka ee su’aasha 1-aad: Cudurkan Covid-19 sidiisaba waa cudur ku dhaca meelaha neef mareenka, sida sanka, afka, dhuunta, oo ilaa sambabbada gaara. Marka jawaabtu waxay tahay in qofka markii horeba qabay cudur neef mareenka waxyeelleeya kanna uu ku sii noqonayo dhibaato kasii weyn. Sidaas darteed arrintaas aad uma wanaagsana. Waxaa dhici karta in dadka uu aad u asiibo ay ka mid noqdaan.
Jawaabta dhakhtarka ee su’aasha 2-aad: Cunto uu kariyay qof qaba cudurka corona haddii aad cunto waa khasab inaan cudurka ka qaaddo, maxaa yeelay waxyaabaha fayraska laga qaado waxaa ugu horreeya taabashada, waana sababta loo yiri hala kala fogaado. Sidaas darteed adigoo qofka u dhawaatay ayaad cudurka qaadsiin kartaa, marka haddii aad taabato weelashii uu cuntada ku kariyay ee uu taabtay adigana khasab cudurka wuu kugu dhacayaa.
Su’aal ka timid Nimcaan Jaamac Maxamed, oo jooga Burco, ayaa u dhigneyd sidan:
Su’aal kale waxay ka timid Maxamed Fooxle, oo jooga Galgaduud.
Cabdifataax Jaamac, oo Dhuusamareeb jooga su’aashiisu waxay ahayd:
Cabdirashiid Maxamed Cumar oo Borama jooga, su’aashiisa waxay ahayd:
Jawaabta dhakhtarka: Wax kalsooni darro ah oo baaritaankaas lagu qabi karo ma jirto, sababtoo ah qalabka la isticmaalayo waa mid casri ah oo aad iyo aad looga soo shaqeeyay oo wanaagsan. Kaliya meesha su’aasha ay ka jirto oo shakiga keeni karta waa in qofka baaritaanka qaadaya ay dhici karto inuusan aqoon u lahayn nidaamkii wax loo baari lahaa iyo nidaamkii qalabka loo isticmaali lahaa.
Faarax Jaamac oo aan sheegin meesha uu jooga, ayaa su’aashan soo gudbiyay:
Jawaabta dhakhtarka: Markii la dhaho cudurka wuxuu u daran yahay dadka waayeelka ah micnaheedu ma aha in qof kasta oo da’ ah uu u geeriyoonayo. Laakiin haddii uu qofka waayeelka ah caafimaad qabo, cudurro halis ahna uusan lahayn wuu ka kici karaa xanuunka.
Previous articleCimillada daran iyo cudurka corona marka ay kulmaan maxaa ka dhalan kara?
Next articleSomaliland oo si kulul uga hadashay diyaarad gargaar oo DF ka dejisay Buuhoodle
Xog:Xuseen Caydiid oo shirkad sirdoon oo ajnabi ah u qortay inay madaxweyne ka dhigto
Sawirro: Wabiga Shabelle oo fatahaad ka sameeyey duleedka Jowhar & barakac ka bilowday
Akhri Liiska Magacyada Masuuliyiinta Ku Geeriyooday & kuwa dhaawaca ah Weerarka W/Arimaha Gudaha Muqdisho…
Wararkii ugu danbeeyay Ciidamo Ka Tirsan Dowladda Oo Goordhow Weerar Lagu Qaaday
XOG:Dowladaha kasoo qeyb galaayo caleema saarka Axmed Madoobe oo la’Ogaaday&Safiirka Imaaraatka oo Axmed Madoobe talefoon….
Shiinaha oo si weyn uga carooday magac cusub uu Trump u bixiyay Cudurka Caronavirus
XOG: Madaxweynaha Masar oo Faraha kula jira Khilaafka u dhaxeeya Somalia & Imaaraadka…
Maxay tahay Ujeedka Xukuumada Kheyre ka leedahay Bedelka Sharci No. 130 Ee Bangiga Dhexe?